ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်…
Posted by who who on Nov 28, 2011 in Buddhism | 26 comments
တစ်ခါက မုဆိုးလင်မယား နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ မိန်းမ ဖြစ်သူက မုဆိုး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ဒီအလုပ်လုပ်တာ မကြိုက်ရှာဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့ တော့ သူ့ ယောကျာ်းကို ရှင် ဥပုသ်လေး ဘာလေး စောင့်ပြီး တရားလေး ဘာလေးလုပ်ပါဦးလား။ ရွာထိပ်က ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားပေါ့ ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ မုဆိုးကြီးကလည်း စိတ်လိုလက်ရ သွားရှာတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်း ရောက်လို့ ဘုန်းကြီးကို ကန်တော့ပြီး တပည့်တော်ကို တရားတစ်ပုဒ် လောက် တိုတိုတုပ်တုပ်လေးဟောပေးပါဘုရားလို့ တရားတောင်းတယ်လေ။ ဒီတော့ ဘုန်းကြီး ပေးလိုက်တဲ့ တရားလေး က “ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ ” တဲ့ ။ ဒါအတိုဆုံး တရားပဲတဲ့။
ဒီတော့ မုဆိုးကြီးက အံ့သြသွားတယ်။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ဟာ ဒီမုဆိုး အလုပ် ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ပဲ တောလိုက်မုဆိုးဘ၀နဲ့ရပ်တည်လာတာ(၅၅)နှစ်တောင် ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဘာတိုးတက်မှုမှ မရပါလားဘုရား။ ခုလည်းဘုန်းဘုန်းက ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် ဆိုတော့ ဘယ်နှယ့်များ လုပ်ရပါ့လို့လျှောက်တော့။ ဆရာတော်က ဒီနားလာခဲ့လို့ခေါ်ပြီး သူ့ ကို အပ်နဲ့ ထိုးလိုက်တယ်။ ဒီတော့ မုဆိုး က “ အား ” လို့ ထအော်တာပေ့ါ။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်ကမေးတယ်။ မင်းကို အပ်နဲ့ ထိုးတာကြိုက်လား? တဲ့။ ဒီတော့ မုဆိုးက ပြန်ဖြေတယ်။ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ ဘုရား။ တပည့်တော်က အပ်နဲ့ မပြောပါနဲ့ ၊ မျက်စောင်းထိုးရင်တောင် ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောသတဲ့။ ဒီမှာပဲ ဆရာတော်က ဒါဆို မင်းကိုအပ်နဲ့ ထိုးတာတောင် မကြိုက်ဘူးဆိုရင် လေးနဲ့ ပစ်၊ မြှားနဲ့ ပစ်ပြီး အသက်ကို သတ်ဖြတ်နေတာဟာ ကိုယ် မကြိုက်တဲ့ အလုပ်ကို သူများကို သွားလုပ်နေတာပဲပေ့ါ။
ဒီတရားလေးကို သိခွင့်ရသွားကြကုန်သော စာဖတ်သူအပေါင်းတို့လည်း နေ့စဉ် ကိုယ်ကြိုက် သောအရာများကိုသာ သူတစ်ပါးအား ပြုမူပြောဆို ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြလို့ အကောင်းကံများကို သာ ဖန်တီးနိုင်ကြပြီး ကောင်းကျိုးတွေရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေသော်။
whowho ရေ၊ ဆရာတော်ဟောတဲ့ “ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ”ဆိုတဲ့တရားလေးကို ကြိုက်သဗျို့။
ဒါကြောင့် …….လုပ်သွားပြီ။ (အဲ မန့်သွားပြီ)။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ခုကစလို့ ကိုယ်ကြိုက်တတ်တဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲ ပေးကြပါစို့။
နောက်ဆို ဆင်ခြင် ပါ့မယ်ခင်ဗျာ့
ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ့်ထံပြန်လာမှာ ပါ။ အဲဒါ ဘုရားရှင်ဟောတဲ့
တိုတိုတုတ်တုတ်တရားကို တိုတိုတုတ်တုတ် ပို့စ်နဲ့ရှင်းပြသွားတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ သာဓုပါ။
who who ရေ ဒီလိုလေး သတိပေးလိုက်တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ရွာတစ်ရွာကို ဗီဒီယို ရိုက်ဖို့ေ၇ာက်ရင်း ဦးပဥွင်းလေးတစ်ပါးကို ဖူးဖူးပါတယ် …။
:: ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အရိုးမပါတဲ့ ဘီလူးနှစ်ကောင်ကို နိုင်အောင်ထိမ်းပါ တကာလေးတဲ့…။ ::
အဲဒီလောက်တော့ မတိုပါနဲ့ နဲနဲတော့ အကျယ်ဟောပေးပါဆိုတော့
အထက်လျှာနဲ့ အောက်လျှာကို နိုင်အောင်ထိမ်းပါတဲ့ …။ ပြဿနာ အားလုံးရဲ့ အစဟာ အဲဒီ့နှစ်ကောင်က စတာ များပါတယ် တဲ့..။
ဟုတ် ကျနော်အဲဒီတရားလေးလည်းမှတ်သားဖူးပါတယ်။ စိတ်ထဲတန်းစွဲသွားသလို တန်းပြီးလည်း ကြောက်သွားပါတယ်။ ရွံကြောက်ကြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ မလုပ်ခင် ဟိုဘက်ဒီဘက် စဉ်းစားကြည့်တယ်။ တစ်ခါတလေကြတော့လည်း မုသားမပါလင်္ကာမချောဆိုတဲ့ အတိုင်း နည်းနည်းတော့ လိမ်မိတယ် နောက်ဆို ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဓိကကတော့ ကိုယ်နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကံသုံးပါးထဲကမှ ကာယကံနဲ့ ၀စီကံ အတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပို့စ်မို့ သီလအတွက်ဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့။
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာwho who ရေ
ဝှူဝှူး တင်သမျှ တရားတွေ ထဲမှာ
ဒီတရားလေး ကို သဘောအပေါက်မိဆုံး ၊ အကြိုက်ဆုံး ဘဲဗျာ ။
လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်
(၁) ကိုယ်မကြိုက်ဘူး။ ( ကျောင်းမတက်တဲ့၊ စာမကျက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ
(၂) ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်နေရတယ်။ ( ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်နေရတယ်၊
(ကိုယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အလုပ်တွေတိုင်းကို သူများအပေါ်မှာလုပ်နေတတ်တယ်လေ။) ဆိုတဲ့
ဟူးဟူးရေ… ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံပေးပါ။
Reading Class မှ Advice Column ကို ပုံစံတုပါသည်။
ကျောင်းမတက်တာ စာမကျက်တာ ကိုယ်မကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အဲလို မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ကိုယ့်တုန်းက ကျောင်းမှန်မှန်တက်တယ်။ စာကြိုးစားခဲ့တယ။် ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်ခဲ့ တယ်။
ကိုယ်သာ အပျင်းထူပြီး ကျောင်းပျက်ခဲ့မယ်။ စာမကျက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီတပည့်နေရာမှာသာ ကိုယ်ဖြစ်ကြည့်ခဲ့ရင် ကိုယ်အပြစ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအပြစ်ကို ဆရာမ မဆူပါစေနှင့်။ နားလည်ပေးနိုင်ပါစေ။ ခွင့်လွှတ်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးပြီး အဲလိုလုပ်မှာကို ကြိုက်ခဲ့မှာပဲလေ။ ခုလည်း ဆရာမအနေနဲ့ ကိုယ့်တပည့်တွေအပေါ် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနေတာကိုက ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်နေရတာပါပဲ။
ဝှုဝှုး နဲ့လက်တွေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး နားထောင်ချင်မိသဗ
ကြိမ်လုံးနဲ့ အဆော်ခံရဂျင်သလား ကပေ..။ ဟိုဂ ပြောမရရင် တီးဒါ အကျင့်ပါနေဘီ..။
အော် ကိုရင်ကြောင်လေးတို့ကတော့ လုပ်တော့မယ်။
ဘယ်က အန်တီဝေက ပါလာတာတုန်းဗျို့။
who who ပါ ကြောင်လေးရေ။
ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ခံရမယ်။ (စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး)
သဂျီးပေါဒေါ့ တိယိစ္ဆာန်ဒွေမှာ လူလိုခံဇားဒတ်တဲ့ အသိဆိတ် ရှိဘူးဆိုဘာလားဗြ..။ လူဒွေဂ ဆိတ်ကူးရင် အပိုလုပ်နေဒါဒဲ့..။ မြားများမွေး များမြားသတ်ရင် မြားများစားယလို့ ကုသိုလ်ပိုတောင် ယသေးဆိုဘဲ…။ ကိုကျိုက်တာကိုလုပ်တဲ့..သူ့အသားဂို အပ်နဲ့လာထိုး မနာဒတ်ဖူး မကျိုက်ဆယာလဲရှိဗူးဒဲ့.. လာလုပ်ကြိ ပျုံးပျုံးလေးခံပြမယ်ဒဲ့..။
ကို ၀ုဝု ..(whowho) ကျေးဇူးပါဗျာ.
အင်း တရားတော်ကလည်း ရှင်းရှင်းလေးပဲ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ လူတော်တော်များများက ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်နေကြတာများတယ်လေ သူများ ကြိုက်လား မကြိုက်လားဆိုတာကို ထည့်မစဉ်းစားတတ်ကြတာ များတယ်… ဂွတ် ကောင်းတယ် မှတ်သားစရာလေးပဲ..
သူများမကြိုက်တာ က ကိုယ်ကြိုက်နေတာလည်း မဖြစ်စေနဲ့။
သူများလည်း မကြိုက် ။ကိုယ်လည်း မကြိုက်ရင် မလုပ်နဲ့။